Izindaba - Ubuchwepheshe | Isamba se-crux yokulahleka kwamakhathoni nezinyathelo zokwenza ngcono
Ubuchwepheshe | Isamba se-crux yokulahleka kwamakhathoni nezinyathelo zokwenza ngcono.
Ukulahleka kwamabhizinisi amakhathoni kuyisici esikhulu esithinta izindleko. Uma ukulahleka kulawulwa, kungakhuphula ukusebenza kwebhizinisi ngezinga elikhulu futhi kuthuthukise ukuncintisana kwemikhiqizo. Ake sihlaziye ukulahleka okuhlukahlukene embonini yamabhokisi.
Ukukubeka nje, ukulahleka okuphelele kwemboni yamakhathoni kuyinani lokufakwa kwephepha eluhlaza kukhishwa inani lemikhiqizo eqediwe efakwa kwisitoreji. Isibonelo: okokufaka kwephepha eliluhlaza nyangazonke kufanele kukhiqize amamitha ayisikwele ayisigidi, futhi ivolumu yokugcina yomkhiqizo eseqedile ingamamitha-skwele angama-900,000, bese ukulahleka okuphelele kwemboni kule nyanga yamanje = (100-90) = 100,000 metres square inani lokulahleka okuphelele ngu-10/100 × 100% -10%. Ukulahleka okuphelele okunjalo kungaba inombolo ejwayelekile kakhulu. Kodwa-ke, ukwabiwa kokulahleka kunqubo ngayinye kuzocaca, futhi kuzoba lula kakhulu kithina ukuthola izindlela nentuthuko ukunciphisa ukulahleka.
1. Ukulahleka kwekhadibhodi kwe-corrugator
● Ukusaphazeka kwemikhiqizo enesici
Imikhiqizo engaphelele ibhekisa kwimikhiqizo engafanelekile ngemuva kokusikwa umshini wokusika.
Incazelo yefomula: Indawo yokulahlekelwa = (ukusika ububanzi x inombolo yokusika) × ubude bokusika × inombolo yemimese yokusika yemikhiqizo enesici.
Izimbangela: ukusebenza okungafanele ngabasebenzi, izinkinga zekhwalithi yephepha lesisekelo, ukungalingani kahle, njll.
● Incazelo yefomula
Indawo yokulahlekelwa = (ukusika ububanzi × inani lokusika) × ubude bokusika × inombolo yemimese yokusika yemikhiqizo enesici.
Izindlela zokwenza ngcono: ukuqinisa ukuphathwa kwama-opharetha nokulawula ikhwalithi yephepha eliluhlaza.
● Ukulahleka okukhulu komkhiqizo
Imikhiqizo emikhulu ibhekisa emikhiqizweni efanelekile eyeqa inani elinqunyelwe kusengaphambili lephepha. Isibonelo, uma kuhlelwe ukuthi kudliwe amaphepha ayi-100, kuthi kudliwe amashidi ayi-105 emikhiqizo efanelekile, bese kuthi ama-5 awo abe yimikhiqizo emikhulu.
Incazelo yefomula: Indawo yokulahleka komkhiqizo omkhulu = (ukusika ububanzi × inani lokusika) × ubude bokusikwa × (inani labasiki ababi-inani labasiki abahleliwe).
Izimbangela: iphepha eliningi kakhulu ku-corrugator, iphepha elingalungile elithola ku-corrugator, njll.
Izinyathelo zokwenza ngcono: ukusetshenziswa kohlelo lokuphathwa kokukhiqiza i-corrugator kungaxazulula izinkinga zokulayishwa kwamaphepha okungalungile nephepha elingalungile elithola kumshini owodwa wethayela.
● Ukunciphisa ukulahleka
Ukusika kubhekisa engxenyeni egundiwe lapho usika imiphetho ngomshini wokusika nowokugoqa womshini wethayela.
Incazelo yefomula: Ukunciphisa indawo yokulahlekelwa = (iphepha elisika ububanzi bewebhu × inani lokusikeka) × ubude bokusikwa × (inani lemikhiqizo emihle + nenani lemikhiqizo emibi).
Imbangela: ukulahleka okujwayelekile, kepha uma kukhulu kakhulu, imbangela kufanele ihlaziywe. Isibonelo, uma ububanzi bokusika be-oda bungu-981 mm, futhi ububanzi obuncane bokucheba obudingwa i-corrugator bungu-20mm, bese kuthi u-981mm + 20mm = 1001mm, omkhulu impela kuno-1000mm, sebenzisa kuphela iphepha elingu-1050mm ukuze uhambe. Ububanzi obunqenqemeni buyi-1050mm-981mm = 69mm, enkulu kakhulu kunokucheba okujwayelekile, okwenza indawo yokuncipha yokuncipha inyuke.
Izinyathelo zokwenza ngcono: Uma kungalezi zizathu ezingenhla, cabanga ukuthi i-oda alisikiwe, nephepha lifakwa ngephepha elingu-1000mm. Lapho okwakamuva kuprintwa futhi ibhokisi lisuswa, iphepha lama-50mm ububanzi lingagcinwa, kepha lokhu kuzoba ngezinga elithile Nciphisa ukusebenza kahle kokuphrinta. Okunye okuphikisayo ukuthi umnyango wezokuthengisa ungakucabangela lokhu lapho wamukela ama-oda, uthuthukise ukwakheka kwe-oda, futhi uthuthukise ukuhleleka.
● Ukulahleka kwethebhu
Ukubeka amathebula kubhekisa engxenyeni ekhiqizwa lapho kudingeka iphepha elibanzi lephepha ukondla iphepha ngenxa yokushoda kwephepha lesisekelo lewebhu eyisisekelo yephepha. Isibonelo, i-oda kufanele lenziwe ngephepha elinobubanzi bephepha le-1000mm, kepha ngenxa yokushoda kwephepha lesisekelo le-1000mm noma ezinye izizathu, iphepha lidinga ukondliwa nge-1050mm. I-50mm eyengeziwe iyi-tabulation.
Incazelo yefomula: Indawo yokulahleka kwamathebhu = (iphepha lewebhu ngemuva kwewebhu yamaphepha ahleliwe)) ubude bokusika × (inani lemimese yokusika yemikhiqizo emihle + inombolo yemimese yokusika yemikhiqizo emibi).
Izizathu: ukugcinwa kwamaphepha aluhlaza okungenangqondo noma ukuthengwa ngaphambi kwesikhathi kwephepha elingavuthiwe ngumnyango wezentengiso.
Izinyathelo zokuthuthuka: Ukuthengwa kwenkampani kufanele kubuyekeze ukuthi ukuthengwa kwamaphepha aluhlaza nokugcinwa kwamasheya kuyahlangabezana yini nezidingo zamakhasimende, bese izama ukubambisana namakhasimende ekulungiseleleni iphepha ukuze kutholakale umqondo womsebenzi we-t-mode. Ngakolunye uhlangothi, umnyango wezokuthengisa kufanele ubeke uhlu lwezinto ezibonakalayo ngaphambi kwesikhathi ukuze unikeze umnyango wokuthenga umjikelezo wokuthengwa kwempahla ukuqinisekisa ukuthi iphepha lokuqala likhona. Phakathi kwazo, ukulahleka kwemikhiqizo enesici kanye nokulahleka kwemikhiqizo emikhulu kufanele kube kokulahleka kokusebenza komnyango wokukhiqiza amakhadibhodi, ongasetshenziswa njengenkomba yokuhlola yomnyango ukukhuthaza intuthuko.
2. Ukuphrinta kwebhokisi lokuphrinta
● Ukulahlekelwa okwengeziwe
Inani elithile lokukhiqiza elengeziwe lizongezwa lapho ibhokisi likhiqizwa ngenxa yesilingo somshini wokuphrinta nezingozi ngesikhathi sokukhiqizwa kwebhokisi.
Incazelo yefomula: Indawo yokulahleka kokungezwa = inani lokungeziwe elihleliwe × indawo yeyunithi yebhokisi.
Izimbangela: ukulahleka okukhulu komshini wokuphrinta, izinga eliphansi lokusebenza kwe-opharetha wokunyathelisa, nokulahleka okukhulu kokupakisha esikhathini esizayo. Ngaphezu kwalokho, umnyango wezentengiso awunamandla okuphatha inani lama-oda angeziwe afakiwe. Eqinisweni, asikho isidingo sokwengeza inani elingaphezulu kakhulu. Ubuningi obengeziwe obuningi buzoholela ekukhiqizweni ngokweqile okungadingekile. Uma ukukhiqizwa ngokweqile kungenakugaywa, kuzoba "yimpahla efile", okusho ukuthi, uhlu oludlulelwe isikhathi, okuwukulahlekelwa okungadingekile. .
Izinyathelo zokwenza ngcono: Le nto kufanele ibe ngeyokulahleka kokusebenza komnyango webhokisi lokuphrinta, ongasetshenziswa njengenkomba yokuhlola yomnyango ukukhuthaza ukwenziwa ngcono kwekhwalithi yabasebenzi nezinga lokusebenza. Umnyango wezentengiso uzoqinisa isango levolumu ye-oda, kanye nokukhiqizwa kwevolumu yokukhiqiza eyinkimbinkimbi futhi elula Ukwenza umehluko, kunconywa ukufaka ukwenyuka kwendatshana yokuqala ukulawula kusuka emthonjeni ukugwema okungaphezulu ngokungadingekile- noma ngaphansi- ukukhiqizwa.
● Ukusika ukulahlekelwa
Lapho ibhokisi likhiqizwa, ingxenye ezungeze amakhadibhodi akhishwa ngumshini wokusika ukufa ukulahleka komphetho.
Incazelo yefomula: Indawo yokulahleka kwe-Edge rolling = (indawo elungiselelwe yephepha ngemuva kokugoqa) × ubungakanani bendawo yokugcina impahla.
Imbangela: ukulahleka okujwayelekile, kepha isizathu kufanele sihlaziywe lapho inani likhulu kakhulu. Kukhona nemishini yokusika okokuzenzekelayo, esetshenziswayo, kanye ne-semi-othomathikhi, futhi izidingo zokugoqa onqenqemeni ezidingekayo nazo zihlukile.
Izinyathelo zokwenza ngcono: imishini ehlukene yokusika imishini kufanele ingezwe ngaphambilini ngokugoqa komphetho okuhambisanayo ukunciphisa ukulahleka komphetho ngangokunokwenzeka.
● Okufushane umnyuziki ukusika ukulahleka
Abanye abasebenzisi bamakhathoni abadingi ukuvuza komphetho. Ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi, kuyadingeka ukuthi kwandiswe indawo ethile ezungeze ibhokisi lokuqala (njengokukhuphuka ngo-20mm) ukuqinisekisa ukuthi ibhokisi eligoqiwe ngeke livuleke. Ingxenye eyandisiwe engu-20mm ilahleko elinciphisa ikhasi eligcwele.
Incazelo yefomula: indawo ephelele yokunciphisa ukulahleka kwendawo = (iphepha elilungisiwe lendawo-indawo yangempela yebhokisi) × inani lokugcina impahla.
Imbangela: ukulahleka okujwayelekile, kepha uma inani likhulu kakhulu, isizathu kufanele sihlaziywe futhi sithuthukiswe.
Ukulahlekelwa akukwazi ukuqedwa. Esingakwenza ukunciphisa ukulahlekelwa kuya ezingeni eliphansi nelizwakala kakhulu ngezindlela namasu ahlukahlukene ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke, ukubaluleka kokuhlukanisa ukulahleka esigabeni esedlule ukuvumela izinqubo ezifanele ziqonde ukuthi ukulahleka okuhlukahlukene kunengqondo yini, ngabe kukhona indawo yokwenza ngcono nokuthi yini okudingeka yenziwe ngcono (ngokwesibonelo, uma ukulahleka kwemikhiqizo emihle kakhulu enkulu, kungadingeka ukubuyekeza ukuthi ngabe i-corrugator ilithatha iphepha. Ukunemba, ukweqa ukulahleka kukhulu kakhulu, kungadingeka ukubuyekeza ukuthi ukulungiswa kwephepha langempela kunengqondo, njll.) ukufeza inhloso yokulawula ukunciphisa ukulahleka, ukunciphisa izindleko, nokwenza ngcono ukuncintisana kwemikhiqizo, futhi kungenza izinkomba zokuhlola zeminyango ehlukahlukene ngokuya ngokulahleka okuhlukahlukene. Klomelisa okuhle futhi ujezise ababi, futhi wandise umdlandla wabasebenzisi ukunciphisa ukulahleka.